Luis Diaz ‘ma xiisaynayo inuu ku biiro Tottenham Hotspur.’ | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Ciyaaraha Luis Diaz ‘ma xiisaynayo inuu ku biiro Tottenham Hotspur.’
Luis Diaz ‘ma xiisaynayo inuu ku biiro Tottenham Hotspur.’
Weeraryahanka Porto Luis Diaz ayaa lagu soo waramayaa inuusan xiiseyneynin inuu ku biiro Tottenham Hotspur bishaan.
25 jirkaan ayaa qaab ciyaareed cajiib ah ku soo bandhigay kooxdiisa Portugal intii lagu jiray xilli ciyaareedkii 2021-22, isagoo dhaliyay 16 gool, waxaana uu diiwangeliyay lix caawin 28 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan.
Manchester United iyo Liverpool ayaa lagu tirinayaa inay xiiseynayaan xiddiga reer Colombia, kaasoo dhaliyay 14 gool 18 kulan oo uu saftay xilli ciyaareedkan.
Si kastaba ha ahaatee, warbixin dhawaan soo baxday ayaa sheegtay in Tottenham ay dalab 37.7 milyan ginni ah ka gudbisay weeraryahanka iyadoo rajo ka qabta inay hesho saxiixiisa ka hor inta uusan xirmin suuqa kala iibsiga.
Sida laga soo xigtay Record , Diaz waa uu ka warqabaa xiisaha uga imaanaya Tottenham Hotspur Stadium laakiin haatan uma furna ku biirida kooxda Antonio Conte , maadaama uu aaminsan yahay inay tahay tallaabo dhinac ah.
Weeraryahankan oo la jooga xulkiisa isku diyaarinaya kulamada isreebreebka koobka adduunka ayaa la sheegay in ay Man United daawatay todobaadkii hore.
Diaz ayaa wali labo sano iyo bar uga harsan tahay inuu ku sii wado qandaraaskiisa Estadio do Dragao.
Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay soo dedejisay xiisaha ay u qabto daafaca dhexe ee kooxda Barcelona Ronald Araujo ka hor suuqa kala iibsiga xagaagan. Qandaraaska...
Daawo: Madaxweyne ku-xigeen maamul goboleed oo si cad u sheegay inay...
Dagaalo wali ka socda Muqdisho. Fashilka soo gaaray ciidanka Dowaladda....
Barcelona oo gashay tartanka Jules Kounde?
Sidee Soomaaliya uga adkaatay Kenya. Yaa fulinya xukunkan?
Saadaasha Sky Sports ee Kulamada Premier league-ga Todobaadka, Chelsea oo...